ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू भाग ३, जीवनविरुद्ध सही र गलत | रेमा साहित्य वितरकहरू
ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू—भाग तीन
वाचमेन नी र विटनेस लीद्वाराको
समूह तीन, पहिलो पुस्तक, ४२ पृष्ठहरू ।
वाचमेन नी र विटनेस लीले केवल सही र गलतको सिद्धान्तभन्दा बाहेक नै जिउनको लागि उच्च सिद्धान्त छ भनी प्रकाश पार्दछ । जब हामीले परमेश्वरको जीवनलाई हामीमा परिचालन हुने अनुमति दिँदछौं, यसले हामीलाई उचित जियाइभित्र ल्याउँदछ, जसले मण्डलीको निर्माणको निम्ति परमेश्वरसित सहकार्य गराइको परिणाम दिँदछ ।
कसरी ख्रीष्टियनीटि केवल सही र गलतको मापदण्डमा होइन, तर जीवनमा आधारित छ भनी थाहा पाउनुहोस् ।
कसरी परमेश्वरीय जीवनद्वारा जिउने र तपाईंभित्रको यो जीवनलाई सन्तुष्ट पार्ने भनी थाहा पाउनुहोस् ।
मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको अनन्त योजना के छ भनी पत्ता लगाउनुहोस् ।
बाइबल प्रथमतः जीवनको पुस्तक हो र बाह्य मापदण्डहरूको पुस्तक होइन भनी थाहा पाउनुहोस् । कसरी परमेश्वरको वचन रुचाउने, स्वाद लिने र यसद्वारा जिउने भनी थाहा पाउनुहोस् ।
“ख्रीष्टियान जीवनको लागि आधारभूत हुने ख्रीष्टका अझ बढ्ता अनुभवहरू छन् । विश्वासीहरूझैं, हामी केवल सही र गलतको सिद्धान्तभन्दा बढी, जीवनको झन् उच्च सिद्धान्तअनुसार जिउनुपर्छ । जब परमेश्वरको जीवन हामीमा परिचालन हुँदछ, जीवनको यो चम्काइले हामीलाई उचित जियाइभित्र ल्याउनेछ र हामीलाई परमेश्वरको सामूहिक अभिव्यक्ति, जुनचाहिँ मण्डली हो, भित्र अरू विश्वासीहरूसित निर्माण गर्नेछ । वाचमेन नी र विटनेस लीद्वारा लेखिएका, ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग तीनमा, यी अनुभवहरूको विस्तृत विवरण दिन्छन् । यी सन्देशहरूले दुवै प्रभुमा तिनीहरूका व्यक्तिगत बढाइको निम्ति र मण्डलीको बढाइ र निर्माणको निम्ति सबै विश्वासीहरूभित्र आत्मिक खाना प्रदान गर्नेछन् ।”
जियाइका दुई सिद्धान्तहरूः जीवनको सिद्धान्त वा सही र गलतको सिद्धान्तः के तपाईं कहिल्यै सही, भक्त कुरा गर्नु के हो भनी पत्ता लगाउनुको सङ्घर्षमा अल्झिनुभएको छ । हामीलाई सही र गलतको सिद्धान्तअनुसार हुर्काइएका छन् तर अब ख्रीष्टियानहरूझैं, हाम्रो मापदण्ड उच्च छ—परमेश्वरको जीवनअनुसार जिउनु ! यो जीवन–परिवर्तनमूलक अध्यायमा, वाचमेन नीले जीवनको सिद्धान्तद्वारा जिउनुको यो व्यवहारिक विषय खुल्ला पार्दछ ।
मण्डलीलाई निर्माण गर्ने मार्गः हामीसँग पृथ्वीमा आज उद्देश्य छ र त्योचाहिँ ख्रीष्टको शरीर हुने मण्डली निर्माण गर्नु हो । यो अध्यायमा तपाईंले कसरी तपाईंले अहिले नै मण्डलीको निम्ति परमेश्वरको चाहनामा भाग पाउन सक्नुहुन्छ भनी महसुस गर्नुहुन्छ ।
वचनलाई प्रार्थना–पढाइ गर्नुः एक जना ख्रीष्टियानझैं, बढाइको आवश्यकता हुन्छ । जसरी कुनै बच्चा बच्चा नै रहनु अनौठो हुनेछ, ख्रीष्टियानसित बढाइ नै नहुनु पनि असामान्य हो । कसरी हामी प्रभुमा बढ्छौं ? योचाहिँ परमेश्वरको वचनमा भएको आत्मिक दूध र पोषणद्वारा नै हो ! विटनेस लीले हामीलाई प्रार्थनाद्वारा जीवित तरीकामा कसरी परमेश्वरको वचनलाई लिने भनी गोप्य कुरा दिँदछ ।
परमेश्वरको कार्यप्रणाली जीवनको ज्ञान
कपिराइट © 2011-2021 रेमा साहित्य वितरकहरू